Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Kalmar län / Borgholm
Degmada Borgholm waxay ku taalaa jasiirada quruxda badan ee Öland. Halkan waxaad dhanka dhulka kaga iman kartaa iyadoo la soo marayo buundada Ölandsbron. Öland waxay leedahay deegaan qurux badan waxayna ka mid tahay meelaha tirada yar ee Iswiidhan ee ugu badan dhanka saacadaha ay cad-ceed ka jirto. Borgholm, Köpingsvik iyo Löttorp waa goobaha ugu waaweyn degmadan.
3,659 kiilomitir oo laba jibaaran
Kalmar 40 kiilomitir
Karlskrona 126 kiilomitir
Norrköping 280 kiilomitir
Öland waxaa yimaada dalxiisayaal badan si ay ugu raaxaystaan deegaanka, dhaqanka iyo xeebahayaga dabaasha ee fiican.
Degmada Borgholm malahan shirkad guri. Guryaha waxaa laga kireystaa shirkadaha gaarka loo leeyahay ee degmada.
Luqadaha lagaga hadlo Borgholm waxaa ka mid ah Carabida, Kurmaanji, Faarsi/Daari, Tigrinya iyo qaar kaloo badan.
Degmada Borgholm waxaa ka jira illaa 200 oo jaaliyadood iyo ururo. Waxaad jaaliyadaha/ururada kaa raadin kartaa liiska jaaliyada ee degmada.
Degmada Borgholm oo ah xaafadda ugu weyn ee isla degmada Borgholm waxaa ku yaal farmashiiye, maktabad, bangiyo, dukaamada cuntada, tima jare, dukaamada gacan labaadka iyo dukaamada waxyaabaha kala duwan lagu gado sida dharka, radiyaha, telefishinka, ubaxyada, dukaamada alaabta guryaha, kuwa alaabta elektaroonikada. Borgholm waxaa ku yaal meel lagu dabbaasho, hool isboortis, garoon kubadda cagta iyo meelaha jir dhiska oo fara badan.
Dugsiyo xanaano ayaa ku yaala magaaladan xarunta ah ee Borgholm iyo dhowr ka mid ah magaalooyinka yar yar. Borgholm waxaa ku yaala xitaa dugsiga xanaanada ee furan.
Dugsiga xanaanada ee furan.
Dugsiyo hoose-dhexe waxay ku yaalaan dhowr ka mid ah xaafadaha degmadan.
Barnaamijka dugsiga sare wuxuu ku yaalaa Kalmar, halkaas oo ardayda degmada ay fursad u haystaan inay ugu safraan si maalinle ah.
Ururka dugsiga sare ayaa habeeya waxbarashada dadka waaweyn, waxbarashada dadka waaweyn ee laxaadkoodu kala dhantaalanyahay iyo Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga (sif) kuwaas oo ku yaala Borgholm Xarunteeda waxbarashada ee Öland.
Iskoolkan waxaa laga helaa waxbarashooyinka:
Daryeelka iyo xanaanada
Kijada iyo maqaaxida
Daryeelka xayawaanka ee soo sarka caanaha (tababar ahaan)
Daryeele caruur/kalkaaliye arday.
Rug caafimaad ayaa ku taala Borgholm iyo Löttorp. Borgholm waxaa ku taala xitaa rugta daryeelka caruurta iyo hooyada. Daryeelka caafimaadka ilkaha wuxuu ku yaalaa Borgholm iyo xitaa dhowr ah rugaha daryeelka ilkaha oo si gaar ah loo leeyahay.
Turjubaan waa la dalban karaa marka aad la kulmeeysid dhakhtar iyo mararka kale oo aad u baahan tahay turjubaan.
Waxaa jira basas isku xiriiriya dhowr ka mid ah qaybaha degmadan. Jadwalka wakhtiga iyo macluumaad dheeraad ah waxaa laga helayaa bogga intarnatka ee gaadiidka gobolka Kalmar.
Gaadiidka dadweynaha ee degmadan.
Degmada Borgholm waa shaqa bixiyaha ugu weyn ee degmada, qeybaha ugu weyna waa caafimaadka iyo daryeelka.degmada waxaa kaloo ka dhisan shirkado isugu jiro waaweyn iyo yaryar waxeeyna ka shaqeystaan dhinacyada beeraha iyo dalxiiska, maadaama dakhliga degmada oo dhan badankiis oo ku dhisan yahay dalxiiska. Shirkado badan oo kuwaas kamid ah waxeey dad badan shaqaaleeysiiyaan xilliga xagaaga oo ah marka eey dadka usoo dalxiis tagaan degmada.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Borgholm